10 Apple က iPhone အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်တောက်ပတည်းဖြတ်မူများကို7- သတင်း Rule
10 Apple က iPhone အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်တောက်ပတည်းဖြတ်မူများကို 7
ထက်လျော့နည်းနှင့်အတူဖုန်းများပေးသည်သောကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်အင်္ဂါရပ် 20% အာဏာကိုတစ်ဦးအနည်းငယ်တိုးမြှင့်တစ်မြို့ရိုးကိုဆန့်ကျင်ပစ်သောအခါ - အမျက်ဒေါသကိစ္စများနှင့်အတူသူတို့အဘို့ပြီးပြည့်စုံသော!
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “10 တောက်ပတည်းဖြတ်မူများကို Apple က iPhone အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ် 7” သောမတ်စ် Batten ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com သောကြာနေ့ဇန်နဝါရီ 8 ရက်အပေါ်များအတွက် 2016 16.41 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ဒီအပတ်, ကောလာဟလများကြောင့် Apple က, တစ်ဦး sleeker ဖုန်းကို၎င်း၏ neverending ရှာပုံတော်အတွက်, ဖြစ် စံ 3.5mm headphone jack များနဲ့ပြောင်းလဲ လာမည့် iPhone ကိုအတွက်7တစ်ဦးစိတ်ပြင်းထန်ခြင်းသို့အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်စေလွှတ်ပြီ. ထိုနားကြပ်ပြောဆိုမှုမျိုးတွေရဲ့အဖြူဆူညံသံအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ, သို့သော်, အိုင်ဖုန်းမှအခြားအညီအမျှတောက်ပကောလာဟလတည်းဖြတ်မူများကိုနှင့်တိုးတက်မှု၏နံပါတ်ရှိပါသည်.
တိုးမြှင့်ဘက်ထရီသက်တမ်း iPhone အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သမျှလုပ်သင့်တယ်7စွဲချက်အကြားအဖြစ်အများအပြားနှစ်ခုအဖြစ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှအသုံးပြုသူများအတွက်, နှင့်တာရှည်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်အင်္ဂါရပ်ထက်လျော့နည်းနှင့်အတူဖုန်းများအားငါပေးမည် 20% တစ်မြို့ရိုးကိုဆန့်ကျင်ပစ်ကြသောအခါအနည်းငယ်တိုးမြှင့်ပါဝါ.
အနည်းငယ်လေပြေနှင့်ထိတွေ့ပါကချိုးမည်မဟုတ်ဒါကြောင့်အဆိုပါ iPhone ကို7ရဲ့ screen ကိုပုံအဆင့်မြှင့်ခဲ့, ဘလော့ဂါများသစ်မျက်နှာပြင်လေပြင်းတိုက်ခြင်းဆန့်ကျင်တက်ကိုင်မည်ကိုမည်သို့ကောင်းစွာကျော်ခွဲခြားထားတယ်ပေမဲ့.
တစ်ဦးကလုံးဝပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောကင်မရာကိုသစ်ကို built-in ဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်, Instagram ကို-မှုတ်သွင်းထားသော filters, ထိုကဲ့သို့သောသူတို့ selfies ဖမ်းယူလာသောအခါသုံးစွဲသူများက '' မျက်စိထဲမှာအလွန်ဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေမျိုး softens ကြောင်း Tinder တူချိန်းတွေ့ apps များနှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူများကိုဦးတည်ရည်ရွယ်တစ်ဦးအဖြစ်.
တချို့ကသတင်းရပ်ကွက်များက Apple အိုင်ဖုန်း၏ကန့်သတ်ထုတ်ဝေတစ်ခုတည်းမိတ္တူထုတ်သဖြင့်တင်ပါးဆုံရိုး audiophiles မှအယူခံဖို့စီစဉ်ကြောင်းယုံကြည်7ဗီနိုင်းအပေါ်. ချစ်သူတို့အမေရိကန်လုပ်ငန်းရှင် မာတင် Shkreli ဒါကြောင့်ဝယ်ယူရန်စိတ်ဝင်စားဖြစ်ကောလဟာလသတင်းများအရဖြစ်ပါတယ်.
အဆိုပါ iPhone ကို7ပေါင်း Taco Bell ကိုမီးသတ်ငံပြာရည်သုံးခု packets တွေကိုကိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကြီးမားတဲ့ device ကို၏နောက်ကျောသို့ built အသစ်တစ်ခုကိုဝှကျထားအခန်းမည်ဖြစ်သည်, အ packets တွေကိုသီးခြားစီရောင်းချသွားကြသည်ပေမယ့်, နည်းပညာအတွင်းထုတ်ဖေါ်.
အများအပြားကကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေ Siri ကိုသူမကိုခြိမ်းခြောက်ခံရသောအခါအသိအမှတျပွုနိုငျရနျနှင့် wheedling ingratiation တသူမ၏ပုံမှန်အားဖြင့် smug သေံညှိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အများကြီးပိုမိုခေတ်မီသောစကားသံအသိအမှတ်ပြုနည်းပညာကိုပေါင်းစပ်လိမ့်မည်ဟု Siri ၏ operating system သစ်တိုးတက်မှုရှိလိမ့်မည်အကြံပြုခြင်းနေကြတယ်.
တစ်ဦးကလုံးဝ retooled Apple မြေပုံအသုံးပြုသူများကနှစ်ယောက်ထက်ပို Donald Trump ကိုထောက်ခံသူတွေ avowed ဘယ်မှာဒေသများသို့နီးကပ်၌သူတို့ကိုဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့လမ်းကြောင်းများသိမ်းယူပြီရှောင်ရှားကူညီပေးပါမည်.
အံ့သြစရာကောင်းတာက, သင်တို့ကိုနေ့ချင်းညချင်းအတူတူတစ် box ထဲမှာနှစ်ဦးရဲ့ iPhone 7s တင်နှင့် Al Green ရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံး Hits ကစားရန်တစ်သူတို့ကို ထား. လျှင်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့, သငျသညျအကွောငျးကိုကိုးလအကြာတွင်တစ်ဦးက iPhone 7s ခံယူပါလိမ့်မယ်.
နှစ်တစ်ထောင်သည်အသုံးပြုသူများမှအယူခံနိုင်ရန်အတွက်, iMessage ကိုသင်ျာပါတယ် "ဟုအမည်ပြောင်းခဲ့, သင်ကရရှိသွားတဲ့သူကတစ်ဦးတည်းသာနေနှငျ့သငျဒါနေ, ဒါကြောင့်လက်ျာ။ "
ဒီတစ်ခါလည်းအများဆုံး excitingly, ဒါကြောင့်အားလုံးအသီးအသီးကို iPhone ကအတည်ပြုပြီ7device ကိုဆောက်လုပ်ထားသောသူတရုတ်မိဘမဲ့တယောက်နေတဲ့လက်ရေးစာကိုအတူပါလာလိမ့်မယ်, သူတို့ကအောင်နှင့်သင်မည်သည့်အပြစ်စိုးရိမ်ပူပန်သို့မဟုတ်မခံစားရသင့်ကြောင်းနှစ်သက်ကြောင်းလက်မှတ်.
22997	2 ပန်းသီး, အပိုဒ်, computing, အင်္ဂါရပ်များ, Instagram ကို, iPhone ကို, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, စမတ်ဖုန်း, နည်းပညာ, သောမတ်စ် Batten
← ပိုမိုနီးကပ်စွာသော့ချက်ဖြစ်ပြဦးနှောက်ရောင်ရမ်းခြင်းအဖြစ်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကုသ Oculus Rift: Facebook ရဲ့ virtual reality နားကြပ်ကဒီမှာ →